Ukwenza njani ukuZenzekelayo ukuHamba kokuHamba kokuSebenza kweMveliso eyandisiweyo | Martech Zone
Ngaba uyasokola ukukhulisa imveliso kwishishini lakho? Ukuba kunjalo, akuwedwa. IServiceNow ixele ukuba abaphathi namhlanje bachitha imali eninzi Iipesenti ezingama-40 zeveki yomsebenzi kwimisebenzi yezolawulo-ethetha ukuba banesiqingatha nje seveki sokugxila kwimisebenzi ebalulekileyo yeqhinga.
Iindaba ezimnandi zezokuba kukho isisombululo: ukuhamba komsebenzi ngokuzenzekelayo. Amashumi asibhozo anesithandathu eepesenti zabaphathi bakholelwa ukuba iinkqubo zomsebenzi ezizenzekelayo ziya kwandisa imveliso yabo. Kwaye Iipesenti ezingama-55 zabasebenzi bonwabile malunga nethemba leenkqubo ezenzekelayo ezithatha indawo yomsebenzi ophindaphindiweyo.
Ukuba ufuna ukutsiba iqhinga lokuzenzekelayo lokuhamba komsebenzi, cinga ukwamkela isisombululo sefom esine-intanethi. Iifom ezikwi-Intanethi sisixhobo esihle sokulawula ngokufanelekileyo intengiselwano yedijithali, kwaye banokunceda onke amasebe kwinkampani yakho ukuba asuse imisebenzi edinisayo ekusebenzeni kwabo.
Amaqela entengiso anokuzuza ngakumbi ekusebenziseni itekhnoloji yeefom ye-intanethi ukwenza iinkqubo ezilungelelanisiweyo. Nazi iindlela ezimbalwa ezibalulekileyo kwiifom ze-intanethi ezinokuphucula ukuhanjiswa kokusebenza kwemveliso eyandisiweyo:
# 1: Gcina ixesha kuyilo lweFomu enophawu
Ukuphawulwa yinxalenye enkulu yentengiso. Yonke into isebe lakho lentengiso elibeka phambi kwabathengi-kubandakanya iifom ezikwi-Intanethi- kufuneka zilingane nembonakalo kunye nokuziva kwegama lakho. Kodwa ukwenza ifom enophawu ekuqaleni kunokuba lixesha elikhulu lokuncancisa.
Faka umakhi weefom online.
Isixhobo sefom ye-Intanethi sinokunceda isebe lakho lentengiso ukuba liyile ngokukhawuleza kwaye lipapashe iifom ezinophawu lokuqokelela izikhokelo ezingaphezulu. Ukusebenza koyilo loyilo kuvumela iqela lakho ukuba lisete imibala kunye neefonti zeefom kwaye zilayishe iilogo ngaphandle kolwazi lokufaka iikhowudi! Unokufaka ngaphandle iifom kwiifom ezikwi-intanethi kwiwebhusayithi yakho ngokulula.
Ngaba ufuna ubungqina bokuba iyasebenza? Amandla alula okubeka uphawu kunye neefom ezinokungeniswa ezinokubonelelwa kusetyenziswa umakhi weefom ezikwi-Intanethi iyunivesithi enye yonyusa utyelelo kwikhampasi ngama-45 epesenti kwaye yonyusa ubhaliso ngama-70 epesenti kwiminyaka emibini nje.
# 2: Ngokukhawuleza nangokuLula ukuqokelela iiNkokeli ezifanelekileyo
Ukuqokelela izikhokelo ezifanelekileyo zeshishini yeyona nto iphambili kumasebe amaninzi okuthengisa. Kwaye ukusebenzisa umakhi weefom ye-Intanethi ukwenza iinkqubo zokuqokelela ezikhokelayo kunokusebenza ngokubalaseleyo.
Ngesixhobo sefom ye-intanethi, abathengisi banokwenza iifom zobhaliso lomnyhadala, iifom zonxibelelwano, uphando lwabathengi, iifom zokukhuphela umxholo, kunye nokunye ukuqokelela ngokulula. Banokusebenzisa form kubahlalutyi Iimpawu zokufumana iibhotile ezinokubakho kwifom kwaye ngokukhawuleza wenze uphuculo ukunyusa izinga lokuguqula.
inye arhente yentengiso yedijithali ukuvavanya oku kunye nomxhasi woluntu lwezonyango kwaye wanceda umxhasi ukuqokelela nokulawula ukubhaliswa kwe-1,100 kumazwe angama-90 kwiintsuku ezingama-30 nje. Iarhente ikwonyuse izinga lokuguqulwa kwefom yokubhalisa ngepesenti ye-114.
# 3: Yenza uHlu oluFikelelekayo loLwazi lweDatha yokuKhokela
Xa idatha ekhokelayo sele iqokelelwe, kubalulekile ukuba abathengisi (kunye nabathengisi) bafumane ukufikelela ngokulula kuyo ukuze bakwazi ukulandelela kunye nokuhlalutya umgangatho wezikhokelo kunye nokulandela xa kukho imfuneko. Umakhi weefom kwi-Intanethi unokwenza lula le nkqubo.
Idatha eqokelelwe ngeefom ezikwi-Intanethi zingagcinwa kwaye zijongwe kwindawo ehleliweyo, ekwabelwana ngayo ngedatha, ukuvumela abathengisi kunye nabathengisi ukuba babone kwaye babhalise ukubhalisa, imibuzo kunye nezikhokelo. Idatha inokuhanjiswa ngokuzenzekelayo kwezinye izixhobo ezisetyenziswa liqela, njengenkqubo yokuthengisa nge-imeyile okanye umphathi wobudlelwane nabathengi.
Ukuhambisa ukuhamba kwakho kwintengiso ngenkqubo yokuzenzekelayo kunokuba nefuthe elikhulu kwimveliso yesebe. Sebenzisa umakhi weefom kwi-Intanethi ukudala ngokukhawuleza iifom ezinophawu lokuqokelela ngokufanelekileyo kunye nokulawula idatha kwindawo yogcino efikelelekayo kunokongela abathengisi ixesha elinzima. Kwaye ukonyusa imveliso yeqela lakho lentengiso inokuba linyathelo lokuqala lokudala ukusebenza ngokukuko kunye nokusebenza ngempumelelo kwishishini lakho.
tags: ukuqokelela umkhokeloifom infographicindlela yobumei-hub yolwazikhokela idathaumakhi weefom onlineizikhokelo ezifanelekileyoiifomati zewebhuiifom zewebhu